निर्देशिकाविपरीत स्टार र केएमसीलाई स्वाब संकलनको अख्तियारी - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Breaking News निर्देशिकाविपरीत स्टार र केएमसीलाई स्वाब संकलनको अख्तियारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नै निर्देशिकाविपरीत निजी अस्पताललाई नमुना संकलन गरेर कोरोना परीक्षण गर्ने अख्तियार दिएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले बनाएको निर्देशिकामा भने निजी अस्पतालले नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्न नपाइने उल्लेख छ
विज्ञ सल्लाहकारलाई संसदीय समिको प्रश्नै प्रश्न
समितिले वार्ता समितिमा संयोजकको भूमिकामा बस्ने अधिकार कसले कहाँबाट दिएको, लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाली रुपैयाँमा गरेको र सम्झौता गर्दा यूएस डलरको दरमा सम्झौता गर्दा वार्ता समितिले कसरी सिफारिस गरेकोलगायतका प्रश्न समितिमा आबद्ध सांसदहरूले तेस्र्याएका छन् ।
अधिकांश सांसदको प्रश्न छ, ‘विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारको हैसियतले खरिद प्रक्रियामा निर्णय लिने नेतृत्व गर्नुभएको देखिएको छ । अनधिकृत रूपमा वार्ता समितिको संयोजक भई प्राइस नेगोसिएसन गर्नुभएको देखिन्छ किन ?’
समिति सदस्य सांसद मिनेन्द्र रिजालले परिस्थितिलाई देखाएर उम्किन नमिल्ने बताए । समिति सभापति भरतकुमार शाहले सुझाव दिनुपर्ने व्यक्ति प्रत्यक्ष संलग्न किन भएको भन्दै विज्ञ सल्लाहकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।
यस्तै, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव यादव कोइराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिलाई किन भूमिका नदिएको ? खरिद प्रक्रियामा असम्बन्धित व्यक्तिलाई किन संलग्न गराएको ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीले स्वास्थ्य खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता बाध्यात्मक परिस्थिति भएको बताए ।
उनले भने, ‘मलाई वार्ता समितिको संयोजक बसिदिनुस् भनेर आग्रह भएपछि संयोजक बनेको हुँ । म आपूर्तिमा संलग्न भएको छैन ।’ उनले मूल्यसूचीमा नेगोसिएसन गर्ने वार्तामा आफू बसेको र ओम्नीले ०.५ प्रतिशत घटाउने सहमति गरेको बताए ।
उनले भने, ‘यो २५-३० मिनेटको संलग्नता हो मेरो । त्यसअगाडि र पछाडि मेरो संलग्नता छैन । कुनै कम्पनीलाई मैले पहिले चिनेको पनि थिइनँ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कोइरालाले भने प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि भए पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता पुष्टि भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए । स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले त्यतिबेलाको परिस्थिति जटिल रहेकाले केही महँगो मूल्यमा खरिद गरिएको बताए ।